Rebuilding initramfs file in RHEL/CentOS7 ~ Root Of Info
Rebuilding initramfs file in RHEL/CentOS7
on April 21, 2020 in Linux with No comments
Hello and long time no post :)
ဒီနေ့ Tutorial မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ linux system တစ်ခုမှာ boot process အတွက်အရေးပါတဲ့ file တစ်ခုဖြစ်တဲ့ "initramfs" အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျွန်တော် screenshot တွေ စာတွေ နဲ့မဟုတ်ပဲ video tutorial တစ်ခုအနေနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းလဲ စာတွေစီပြီး ရေးတာထက် Youtube ကနေ video tutorial ပိုလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်. အဲ့တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့youtube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် :)
အိုကေ ဒီတော့ initramfs file ဆိုတာဘာလဲ သူနဲ့ပတ်သတ်ပီး ဘယ် commands တွေကိုအသုံးပြုနိုင်လဲ initramfs file ကို rebuild ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ စတာတွေကို ဒီ tutorial ထဲမှာရှင်းပြထားပါတယ်။ ပထမဆုံး Video tutorial ဆိုတော့ အဆင်မပြေတာတွေရှိခဲ့ရင်သည်းခံပေးကြပါ။
Thanks and Enjoy Watching!!! :)
Follow and Like the Root OF Info Page and Youtube Channel.